» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:२९
मकवानपुर, २९ फागुन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ फागुन २४ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण आरम्भ भएको छ । यस भिडियो सिरिजको दोस्रो भागमा पोखरा अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका ३ प्रतियोगीहरु सुनिल बिक, सफल गायक र रुपेश भण्डारीका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
६) रुपेश भण्डारी– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि पोखराबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् रुपेश भण्डारी । लेकसाईड जरेबरमा बसोबास गर्ने रुपेश जन्मैदेखि दृष्टिविहिन हुन् । साथीहरुले स्वर राम्रो छ भनेर हौसला दिएपछि उनी संगीतमा अगाडि बढेका हुन् । त्रीवेणी संगितालयमा संगीत सिक्दै गरेका रुपेशले प्ले ब्याक सिंगर बन्ने लक्ष्य राखेका छन् । उनले अडिसनमा ‘सपना भुलाई सारा’ बोलको गीत गाएका थिए । स्वर मिठो भएपनि संगीतमा अझै सुधार जरुरी रहेको भन्दै उनलाई दोस्रो अडिसनका लागि निर्णायकहरुले छनौट गरेका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।